120Hz inoratidzira zvakare pakati peakataurwa makuhwa einotevera iPhone | IPhone nhau
120Hz inoratidzira zvakare pakati pezvakataurwa runyerekupe rweinotevera iPhone
Jordi Gimenez | 19/04/2021 10:00 | IPhone Zviteshi
Ehezve tanga tave nemavhiki umo makuhwa eiyo inotevera iPhone modhi haamire kusvika. Zvinoita sekudaro Apple inoratidza inogona kushandisa LTPO tekinoroji ine 120Hz soda makapuZvinotaridza pachena kuti inotevera iPhone modhi inotungamira kune iyi mhando yekrini uye isu tinofuratira runyerekupe.
Mune ino kesi se inotaura nezve iyo iPhone 13 Pro mamodheru semidziyo ingadai iine iyi mhando yemasikirini akaiswa mamwe ese emamodeli anogona kukwidza OLED skrini senge atinawo nhasi mu iPhone 12, 12 Pro uye 12 Pro Max.
In the Ross Young's Twitter account, Zvekare, mutoro uripo nerudzi urwu rwechidzitiro, uye zvakare inobvunza vashandisi kana kuti zvirinani vateveri veApple kuti vazorore nemusoro uyu:
Vakanzwa mamwe makuhwa mumaindasitiri nenhau kuti paizongova nemhando imwe yeLPO kubva kuApple gare gare gore rino. Unogona kusimbisa kuti handizvo. Apple mafeni anogona kuzorora!
- Ross Mudiki (@DSCCRoss) April 16, 2021
Iri irobhoti rave richiitika pamusoro pemwedzi, ini ndingati kunyangwe makore, kubvira yezvazvino iPhone 12 mamodheru zvaitaurwawo pamusoro pekuuya kwerudzi urwu rwezvikwiriso ine 120Hz zororo reti. Sezvo isu tese tichiziva, pakupedzisira izvi zvaive zvisiri izvo.
Samsung ne LG kuratidza kwaizove nebasa rekupa rudzi urwu rwezvikwiriso kune idzva mhando dze iPhone 13. Muchokwadi, izvozvi iPad Pro yatove nerudzi urwu rwechidzitiro uye chaizvo mutsauko unongoonekwa kana iwe ukaisa imwe padivi peimwe, iyo kureva, kana iwe uine iyo Pro Pro ine mwero wekuzorodza we120 Hz uye imwe iri padyo nayo iyo isingaiti. Iwe unofunga kuitiswa kwerudzi urwu rwechidzitiro kwakakosha kune iyo iPhone 13?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » 120Hz inoratidzira zvakare pakati pezvakataurwa runyerekupe rweinotevera iPhone
Juan Ignacio akadaro
Sezvo zviri zveApple, inokwanisa kuti hapana skrini inounza inotevera iPhone! Apple yakaipa, inogara iri kumashure, laggards senguva dzose!
Pindura Juan Ignacio
Apple: Carbon Kusaverekera Target na2030
Apple Music inoti inobhadhara peni yega yega kubereka kune muimbi